लियो क्लबद्वारा स्वीटर वितरण - News Birat
लियो क्लबद्वारा स्वीटर वितरण
बेलबारी । लियो क्लब अफ बेलबारीले विद्यालयका बालबालिकाहरुलाई न्यानो स्वीटरका साथै शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बेलबारी–८ स्थित सुकुना आधारभुत विद्यालयका ४१ जना विद्यार्थीहरुलाई स्वीटर र शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ८ नं. वडाध्यक्ष धनपति गौतम, लायन्स क्लब अफ बेलबारीका अध्यक्ष केदार प्रसाईलगायतले बालबालिकाहरुलाई स्वीटर वितरण गरेका थिए । कार्यक्रममा अपांग विद्यालाई ह्वील चेयर समेत वितरण गरिएको थियो ।
लियो क्लब अफ बेलबारीका अध्यक्ष सुनिल रिजालको अध्यक्षमा सम्पन्न कार्यक्रममा केदार प्रसाई, धनपति गौतम, शालिग्राम बस्नेत, विद्यालयका प्र.अ. वीरबहादुर श्रेष्ठलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
बिहीबार, ३ माघ २०७५, १८:१० January 17, 2019 मा प्रकाशित